မြန်မာသံရုံး၊ ဗန်ကောက်မြို့က ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၁) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
မြန်မာသံရုံး၊ ဗန်ကောက်မြို့က ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၁) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
(၁၄-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၁) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ ၁၉၀၀ နာရီမှ ၂၁၀၀ နာရီအထိ ဗန်ကောက်မြို့၊ The Athenee Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်းမှ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်သီချင်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ ကျန်းမာစေရန် ဆုမွန်ချွေခြင်းနှင့် အပြန်အလှန် ဆုတောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဟိုတယ် အစားအသောက်များအပြင် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအသောက်များဖြစ်သော ထောပတ်ထမင်း၊ ကြက်သား၊ ဘာလချောင်ကြော်၊ ဆနွင်းမကင်း၊ ကျောက်ကျောတို့ဖြင့် ကြွရောက်လာသော ဧည့်သည်များအား တည်ခင်းဧည့်ခံခြင်း၊ မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအကများဖြင့် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ကပြမှု များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် (၁၄) ခု၏ အထင်ကရနေရာများအား ပြသထားသည့် ရှုခင်းအလှဓာတ်ပုံ (၂၈) ချပ်အား ခင်းကျင်းပြသခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးပို့သည့် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် (၁၄) ခု၏ လက်ကမ်း စာစောင်များ ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီး H.E. Police General Adul Sangsingkeo၊ နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Virasakdi Futrakul နှင့်ဇနီး၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Gen Bundit Boonyapan တို့ အပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိကြီးများ၊ ဗန်ကောက်မြို့ အခြေစိုက် သံရုံး၊ အဖွဲ့ရုံးများမှ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့် သံတမန်များ၊ ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများမှ အကြီးအကဲများ၊ စစ်သံမှူးများ၊ ထိုင်းအစိုးရ စစ်ဘက်/ နယ်ဘက်မှ အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနှင့် ထိုင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ မြန်မာမိတ်ဆွေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာတော်သင် ကျောင်းသား/သူများ နှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ စုစုပေါင်းဧည့်ပရိသတ် (၄၀၀) ကျော် စုံညီစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။